﻿ पुरानो मोबाइल बेच्नु अघि यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
पछिल्लो समय बनेका केही वेबसाइटहरुले एक पटक प्रयोग भएका सामान बेच्न झनै सजिलो बनाइदिएका छन् । त्यसले गर्दा सेकेन्ड मोबाइलको कारोबार पनि राम्रो देखिन्छ ।
तपाईले सेच्नु भएको छ, यसरी सेकेन्ड ह्यान्डमा आफ्नो मोबाइल बेच्दा तपाईलाई खतरा पनि हुन सक्छ ।
सामान्यतया मानिसहरु सेकेन्ड ह्यान्डमा बेच्दा सिमकार्ड र मेमोरी कार्ड निकालिदिन्छन् । तर, के मोबाइलमा लग इन भएका अन्य आइडीहरु लग आउट गर्नुभएको छ ? त्यसरी लगआउट नगरी मोबाइल बेच्दा विभिन्न व्याक्तिगत डाटाहरु अरुको हातमा पुग्न सक्छन् ।
आफ्नो मोबाइलमा लगइन भएको सबै सामाजिक संजालहरु फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम वा ट्विटरका एपहरु पनि लगआउट गर्न विर्षनु हुँदैन । लग आउट मात्रै होइन त्यसपछि मोबाइलको सेटिङमा गएर फ्याक्ट्री रिसेट गर्दा बढी सुरक्षीत मानिन्छ । यसो गर्दा माबाइलमा बाँकी भएका डाटाहरु पनि डिलिट हुन्छन् ।
सामाजिक संजालसँग जोडिएको कुरा मात्रै होइन मोबाइलमा अहिले बैंक तथा अन्य अफिसियल कुराहरु पनि जोडिएका हुन्छन् । त्यस्ता व्याक्तिगत विवरण पनि मोबाइलमा बाँकी रहन सक्छ । केही भइहाल्छ कि भन्ने चिन्ताबाट मुक्त हुनको लागि भएपनि फ्याक्ट्रि रिसेट गर्न भुल्नु हुदैन ।
मोबाइलको फ्याक्ट्रि रिसेट गर्दा त्यसअघिको डाटा पाइदैन । त्यसैले मोबाइल बेच्नु पूर्वनै सबै डाटाहरु अरु कुनै सुरक्षीत ठाउँमा राख्नुपर्छ । वा मोबाइल ब्याकअपमा राख्नुपर्छ । अत्यान्त महत्वापूर्ण फोटो वा सामाग्री यसरी मोबाइलमा ब्याकअप गर्दा पछि आवस्यक परेको अवस्थामा भेट्न सकिन्छ ।
प्राय अहिले सबैको मोबाइलमा जिमेल लगइन हुन्छ । त्यसैले मोबाइल बेच्नु पूर्व जिमेल खाता पनि लगआउट गर्नुपर्छ । त्यस्तै तपाईले अर्को कुरा याद गर्नुभएको छ ? मोबाइलको ब्राउजरमा तपाईको मोबाइलमा सेभ भएका पासवर्डहरु बाँकी हुन सक्छन् । त्यसैले मोबाइलको ब्राउजरको प्रोफाइलमा गएर सेभ पासवर्ड अप्सनबाट त्यसलाई पनि डिलिट गर्नुपर्छ ।